Mareykanka: Sare u kaca lamaanayaasha aan isqabin balse ilmo isu dhala - BBC News Somali
Mareykanka: Sare u kaca lamaanayaasha aan isqabin balse ilmo isu dhala
Daraasad cusub ayaa lagu ogaaday in ka badan 16 milyan oo ka mid ah lamaanayaasha ku nool Mareykanka ay carruurta isla korsadaan iyaga oo aan isqabin balse isla nool.
Aron Womack iyo wiilkiisa ayaa la soo degay gabar Aron muddo ku dhawaad labo sano ah uu la sheekeysanayay oo lagu magacaabo Michelle, kaddib markii uu dhammaaday heshiis isaga iyo nin kale ay ku degnaayeen guri kiro ah.
"Arrin macquul ah ayay ahayd," ayuu yiri Womack. Intaa kaddib Aron iyo Michelle waxa ay ku heshiiyeen in ay ubad isu dhalaan, iyaga oo aan is guursan. Afar sano kaddibna, waxa ayba isla korsanayeen ubadkooda iyaga oo aan rasmiyan isqabin.
"Waxa ay dooneysay in ay ubad dhasho, aniguna arrintaa waa ay ila fiicnayd oo waan soo dahweeyay." Ayuu yiri.
Waxa uuna inatasi ku daray "ilama ahan in guurku uu yahay caqabad naga hor istaagi karta in aan ubad isu dhalno."
Kuma eka Aron iyo Michelle oo kaliya
Sanadkii 1968, tirada hooyooyinka korsada ubadka ay u dahleen rag aan qabin ayaa gaarayay 88%. Sanadkii la soo dhaafayna tiradaasi hoos u dhac ayaa ku yimid oo waxa ay ahayd 53%. Balse marnaba ma kordhin tirada ragga carruurtooda korsada xaas la'aan, waxaana isbadalkaasi keenay waalidiinta carruurta wada korsada iyaga oo aan isqabin, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay xarunta cilmibaarista ee Pew.
Arrintan ayaa soo jirtay tobanaankii sano ee la soo dhaafay balse sanadkii 2017, tirada waalidiinta iyaga oo aan rasmiyan isqabin carruurta wada korsada oo wada nool ayaa gaartay 35%.
Click to see content: pew_one_Somali
Guud ahaan, waalidiinta Mareykanka ku nool ee isqaba wada nool ayaa tiro ahaan ah 65%, balse mid ka mid ah saddexdii cannugba waxa uu la nool yahay hooyo aan la qabin ama aabe aan xaas lahayn.
Waxaa hadda aad u badan tirada carruurta aabaha ama hooyada oo kaliya ay korsadaan marka loo eego sanadkii 1968, waxaana sidoo kale 40-kii sano ee la soo dhaafay aad u yaraaday lamaanaha is guursanaya guud ahaan Mareykanka oo dhan.
Stephanie Coontz oo ah agaasimaha daraasaadka ee hay'ad ka sahqeysa cilmibaarista la xiriirta qoysaska ayaa sheegaysa in is badalka dhacaya uu ka dhashay arrimo is biirsaday oo ay ka mid yihiin dadka oo hamigooda guurka uu sarreeyo iyo cabsi ay ka qabaan in mustaqbalka furriin uu yimaado.
Sida ay sheegeysana xaaladdaasi ayaa ku khasabtay dadka in aysan guurka ku deg degin, waxaana fududaaday in hooyada iyo aabaha midba kaligii uu caruurtiisa ama carruurteeda korsado iyo sidoo kale farqiga nolaleed ee dadka dabaqadda dhexe oo ay ku adkaatay in ay mustaqbalka nolashooda qorsheeyaan.
"Dadku, guurka waxay u arkaan arrin aan micno badan ku fadhin marka loo eego sidii ay xaaladdu ahaan jirtay waayadii hore, balse taa badalkeeda hadda waxaa jira xiriir jaceyl oo micno badan ku fadhiyo," ayay tiri Stephanie Coontz.
Click to see content: pew_two_SOMALI
Coontz ayaa sheegeysa in aysan kala caddeyn in lamaanaha aan isqabin ee carruurta isu dhalay ay ugu dambeyntii is guursan doonaan iyo in kale.
Waddamada ku yaalla woqooyiga Yurub waxaa caadi ka ah in lamaanuhu ay rasmiyan is guursadaan kaddib marka ay ubad isu dhalaan.
"Waxa la yaabka leh ayaa ah in dadka inta badan yirahda guurku khasab ma ahan ay yihiin dadka hantiileyaasha ahi basle marka dambe ay u dhow dahay in ay guursadaan."
Waalidiinta rasmiyan aan isqabin basle isla nool ayaa inta badan da'yar ah, waxana suurtagal ah in aysan waligood guursan isla markaana ka ilmo badan yihiin kuwa kala nool, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay hay'adda cilmibaarisat ee Pew.
Inkastoo waalidiinta go'aansada in ay ubad isu dhalaan iyaga oo aan rasmiyan isqabin isla markaana wada noolaadaan ay tahay arrin soo jireen ka ah gudaha Mareykanka, haddaba dadku ma jecla in ay arkaan lamaane aan isqabin oo ubad wada korsanaya.
Click to see content: pew_three_SOMALI
Daraasad ay sanadkii 2015 sameysay xaruntad daraasaadka ee Pew ayaa lagu ogaaday in 48% dadka waa weyn ay wax bulshada u xun u arkayeen lamaanaha aan isqabin ee carruurta isu dhala.
Saddex meelood laba meel dadku waxa ay sidoo kale wax aan bulshada u fiicnayn u arkayeen korarka ku yimid tirada haweenka iyaga oo aan la qabin ilmaha dhalaya isla markaana iska korsada.
Aron ayaa Michelle ka codsaday in ay is guursadaan kaddib markii ay dhaleen cannugoodii ugu horreeyay balse wuxuu hadda ka shakisan yahay suurtagalnimada arrintaasi.
Ehelada iyo saaxibadiisa ayaa mar kastaa weydiinaya marka ay is guursanayaan Michelle balse Aron wuxuu leeyahay arrintaasi ma ahan mid dhib ku haysa maadaama ay u wada nool yihiin sida iyaga oo isqaba.